सरकार र ड.राउतबीचकोे सम्झौता खतरा - Purwanchal Today
सरकार र ड.राउतबीचकोे सम्झौता खतरा
माताको भविश्यवाणी –
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०१, २०७५ समय: २:३९:०४
झापा, अलौकिक शक्ति भएकी सविता सरु शर्मा आचार्यले पछिल्लो पटक सरकार र ड.सीके राउतबीच भएको ११ वुँदे सम्झौता मुलुकका लागि खतराको संकेत भएको भविश्यवाणी गर्नुभएको छ ।
यसले देशमा ठूलो राजनीतिक अन्यौल पैदा गर्ने र मुलुकमा वाहिरी हस्तक्षेत्र बढ्ने खतराको संकेत देखिएको उहाँको भनाई छ । राजनेताले जनता माथि राजनीति गर्न नहुने भन्दै माता आचार्यले भन्नुभएको छ – डा सीके राउतसंग सरकारको सम्झौता हुनु र त्यसलाई फरक फरक व्याख्या गर्नु खतराको संकेत हो र यसले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ ।’
माता आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लेख्नुभएको छ –
‘राणाका पालामासम्म नेपाल औसत रहेको इतिहासमा हामीले पढ्न पाउँछौं र, विश्व मञ्चमा हाम्रो शक्ति मध्यम थियो । त्यति बेला विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक संक्रमण २०१५ सालसम्म जेलियो र २०१७ सालपछि ०४६ सालसम्म पञ्चायत व्यवस्था र त्यसपछि बहुदलीय–गणतन्त्रका शासनका अनेक प्रयोगले मुलुक आन्तरिक रुपमा कमजोर बन्यो । र, यस अवधिमा दलहरू निर्माण भए,नेता जन्मिए र कार्यकर्ता उम्रिए ।
सबका सब खराब भएपछि अहिले नेपाल विश्वकै सबैभन्दा खराब,दरिद्र,गरिब र नालायकको देश बन्न पुगेको छ । नेपाली जनताका लागि सबै शासक खराब प्रमाणित भइसके र निरीह जनतालाई गुमराहमा पारेर पुष्पकमल दाहालले १० वर्ष देश तहसनहस बनाए जनताको रगत बगाइयो अनि यही अवधिमा सोझा जनतालाई झुक्क्याएर अन्य दलका नेताले जनताको पसिना चुसे परिश्रम लुटे र आज देश टुक्य्राउने खेल सुरु भइसकेको छतर,कार्यकर्ता झनै रमिते बनिरहेका छन् । दलका कार्यकर्ता अपराधी नेताको मतियार बनिरहेका छन् र यो दुःखदायी पीडा हरेक सेकेन्ड–सेकेन्डमा‘ जनताहरुले भोगिरहेका छन् र नागरिकतहबाट गर्नुपर्ने हाम्रा कर्तव्य के हुन् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान पुग्न सकेन । राजनीतिमा चासो राख्नै पर्दैन देशको ख्याल गरे पुग्छ । देशको ख्याल गरे गलत र सही छुट्याउन सकिन्छ । तर,राजनीति गर्यो भने मनोगत दृष्टिकोणमात्र पैदा हुन्छ । अधिकांश कम विकसित मुलुकका जनताहरु राजनीतिक मात्र गर्छन् । विकसित मुलुकमा आफ्नो काममात्र गर्छन् राजनीति नगर्ने भनेको होइन यसैमा लाग्नेको संख्या न्यून हुनुपर्छ र राजनीति गर्नेले राजनीतिमात्र गर्नुपर्छ हामीमा अन्य पेसा गर्नेले पनि राजनीति गर्छन ।’
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तीन पटकसम्म राजा हुने योग परेको भविष्यवाणी गरेपछि चर्चामा पुग्नुभएकी माता आचार्यले पछिल्लो पटक कम्युनिष्ट सरकारमा पनि संकट आइपर्ने भविष्यवाणी गर्नुभएको छ । राजसंस्था फर्किएपछि मात्रै नेपाल सम्मृद्धिको मार्गमा जाने उहाँको भविष्यवाणी छ । सात वर्षको उमेरमा अलौकिक शक्ति पाएर सर्वसाधरणदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसम्मको यसअघि उहाँले भविष्यवाणी गरिसक्नुभएको छ । उहाँले नेपालका नाम चलेका राजनीतिज्ञदेखि चर्चित कलाकार, उद्योगपतिसम्मको भविष्यवाणी गर्नुभएको छ ।
राजपरिवारका सदस्यहरु ज्ञानेन्द्र, हिमानी, हृदयन्द्रसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, नायिका रेखा थापा लगायतका दर्जनांै चर्चित अनुहारको भूत, भविष्य र वर्तमान हेरिसक्नुभएकी उहाँले विभिन्न ३२ वटा विभिन्न देशको भ्रमण गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीको समेत भविष्यवाणी गर्नुभएको छ । झण्डै तीस लाख नेपालीको भविष्यवाणी गरिसक्नुभएकी सुनसरीको इटहरी निवासी माता सविता सरु शर्मा आचार्यले अलौकिक शक्तिकै माध्यमबाट देशमा हुने अप्रिय घटनाको समेत भविष्यवाणी गर्दै सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँले विमान दुर्घटनामा मन्त्रीकै निधन हुने भन्दै गरेको भविश्यवाणीले समेत फेल नखाएपनि उहाँको चर्चा झनै चुलिएको छ । उहाँसंग पूर्वाञ्चल टूडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित केही अंश ।
कम्युनिष्ट सरकारले राज्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा तपाईले राजसंस्था फर्कन्छ भन्दै भविष्यवाणी गर्दै आउनुभएको छ के यो सम्भव छ ?
अहिले पनि यही भन्छु राजा नआइकन देश बन्दैन । राजाको नाति हृदयन्द्र राजा बन्ने नै देखेकी छु । ज्ञानेन्द्र सरकार थोरै भए पनि फेरि राजा बन्नु हुन्छ । उहाँको त्यस्तै योग छ । कुनै न कुनै योजना बनाएर उहाँ राजसंस्थामा पुग्नु हुन्छ । उहाँले नै राजसंस्था फर्काउनु हुन्छ । पुरानो संस्कार, पुरानो रीतिरिवाज, पुरानो चालचलन बिर्सिएर कुनै पनि हालतमा देशअघि बढ्न सक्दैन । घरको झगडा मिलाउन बुबाको आवश्यकता पर्छ । नेपालका लागि राजसंस्था बुबा नै हो । बुबा नभई देशअघि बढ्न सक्दैन । नेपाल हिन्दूराष्ट्र नभई हँुदैहुँदैन ।कति
समयपछि फर्किएला त राजसंस्था ?
– अब धेरै समय छैन । म यत्ति भन्छु मुलुकमा राजसंस्था फर्कन्छ । मैले यसअघि पनि भन्दै आएकै छु नि देशलाई राजा चाहिएको छ । मैले धेरै भविष्यवाणी गरेकी छु सबै पुगेका छन् । म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु राजसंस्था फर्कन्छ ।
कम्युनिष्ट सरकारको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
– वामगठबन्धन बीचैमा ब्रेक हुन्छ । वाम गठबन्धनमा संकट आएपर्ने अवस्था छ । म राजनीतिज्ञ त होइन । तर, पनि देखेको कुरा भन्छु । वाम गठबन्धन धेरै समय टिक्दैन र यो सरकारले धेरै समय काम गर्न सक्दैन । देश संघीयतामा गएको छ । तर, मुलुकले संघीयता धान्दैन । एक विगाह जग्गा १० जनालाई बाढ्नु र एक कठ्ठा जग्गा १० जनालाई बढ्दा के हुन्छ तपाई आफैं भन्न सक्नुहुन्छ कति कमाउने कति खाने भनेर ।
संघीयता भनेको एक कठ्ठा जग्गा दश जनालाई बाँडे जस्तै हो । सबै दलका नेता आ–आफ्नै स्वार्थमा हिँँडेका छन् । स्वार्थको राजनीतिले मुलुक बन्दैन मात्र भन्न खोजेकी हुँ । एमालेसँग माओवादी मिल्नु र बाम गठबन्धन हुनु भनेको जस्को शक्ति उसैको भक्ति भने झैं मात्र हो । अहिले वाम गठबन्धन शक्तिमा छ । तर, यो शक्ति समय टिक्दैन । यसको शक्ति बिस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ । स–साना शक्ति एक हुन्छन् । बिस्तारै दलहरुबीचमा मनमुटाव शुरु हुुन्छ । हेर्दै जानु वाम गठबन्धनमा संकट आइपरेकाले मैले यो सब भनेकी हुँ । वाम गठबन्धनको अबस्था त्यत्ति राम्रो देखिँदैन ।
प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसको भविष्य चाँही कस्तो देख्नुभएको छ ?
तपाईंको सुरक्षामा कुनै खतरा त छैन । जस्तो देख्यो त्यस्तै भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ ।
– तपाईहरुले केही समय अगाडि देखिहाल्नुभयो दूधमा विष मिलाएर पनि म माथि हमलाको प्रयास भयो । केही गुण्डा नै आए मलाई सिध्याउन भन्दै । प्रहरीकोमा सुरक्षाका लागि पुग्नु प¥यो । म माथि अहिले पनि विभिन्न खाले षडयन्त्र भईरहन्छन् । तर, माताको शक्तिले त्यो सव उनीहरुको षडयन्त्र विफल हुँदै गएका छन् । म धनकुट्टामा जन्मे र त्यही हुर्किए । सात वर्षको हुँदा मलाई अलौकिक शक्ति प्राप्त भयो । विद्यार्थी जीवनबाटै मैले धेरैको भविष्यवाणी गर्न शुरु गरे । मैले गरेका भविष्यवाणी पुग्दै गएर धेरैले मलाई विश्वास गर्दै जानुभयो । अहिले देश तथा विदेशमा मोरो माग हुन्छ । मैले धेरै देशमा छरिएर रहेका नेपालीको भविष्यवाणी गरेकी छु ।
कतिपयले मलाई निसाना बनाएका पनि छन् । तर, मेरो शक्तिका कारण उनीहरुको योजना सफल हुन सकेको छैन । मानिसको शरीर हो । शक्ति बिस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ । मेरो पनि त्यस्तै भएको छ । अहिले मलाई सुरक्षाको आवश्यकता छ । पहेलो फेटा बाँधेका साधुको त सुरक्षाको विषयमा सरकारले सोचेको छ । तर, म सिंगो देशको भविष्यवाणी गर्दै आएकी छु । सर्वसाधारणदेखि उच्च स्तरका नेताको भविष्यवाणी गरेकाले सुरक्षा चाहिएको छ ।
बिर्तामोड, जिल्ला सहकारी संघ झापाले आज ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका ल...
इलाम, सूर्योदय नगरपालिका–५ शान्तिधाराबाट अवैध रूपमा राखिएका तीन थान भरुवा बन्दुकसहित एकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ...
अब झापामा जथाभावी प्राकृतिक स्रोत दोहन नहुने
सुरुङ्गा, अब झापा जिल्लामा जथाभावी प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न नपाइने भएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ...
सुरुङ्गा , झापाको दमकमा आज साँझ भएको सवारी दुर्घटनामा परी एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । दमक–४ स्थित चिया बगान नजीकै...
विप्लव समूहको चैत १६ को बन्द फिर्ता
झापा, इसइई परीक्षालाई असर गर्ने कारण देखाउँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहले आह्वान गरेको वन्द फिर्ता लिएको छ ...
साता नवित्दै वालिका सहित तीन महिला करणीको शिकार
झापा, झापामा एक पछि अर्काे गर्दै जवरजस्ती करणीका घटना घट्न थालेका छन् । यौन जन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी ...